Fomba fanamafisana ny fanamafisam-peo amin'ny fanambanin'ny hafanam-be
Home / Applications / Induction Heating / Famehezana fanamafisana induction
Sokajy: Induction Heating Tags: fanidiana hafanana, fametahana fantsom-panafody avo, famehezana avo lenta, fanasiana fanasitranana fanindroany, fanidiana fanidiana, fizarana fanidiana induction, fametrahana fanidiana famatsiana
Induction Heating Fitrandrahana miaraka amin'ny fitaovana fanodinana herinaratra fanindroany
Fanamorana ny induction dia manome fitaovana maimaim-poana amin'ny famehezana ny alim-bary amin'ny fonosana vita amin'ny sakafo. The Induction Sealing Healing Ny fomba fitsaboana dia manome antoka ny fiarovana, ny fiarovana, ny fahadiovana ary ny fiarovana ny vokatra. Ny fanamafisana ny famokarana sarimihetsika amin'ny aliminioma dia mampitombo ny hafanan'ny vokatra fanenitra napetraka eo amin'ny sisin'ny cover izay mifandray amin'ny siny. Ity fanamainana ity dia mifamatotra amin'ny tsindry mihatra amin'ny fonony ho an'ny 0.5 ka hatramin'ny 1.5s. Io dingana io dia ampiharina amin'ny karazan-kaontenera rehetra sy amin'ny fitaovana isan-karazany, anisan'izany ny: glasy, kardinaly ary plastika (PE, PP, PVC ...).
Amin'ny tranga rehetra dia tsy misy fifandraisana eo amin'ny inductor sy ny cover. Ankoatra io tombontsoa io dia misy antony marobe ny fampiasana ity fomba vaovao ity:
■ Ny hafanana dia aseho ao amin'ny fonony amin'ny
eo akaikin'ny tombo-kase araka izay azo atao. The
Ny dingana toy izany dia manatsotra sy ny olana
mifandray amin'ny fiatrehana ny rivodoza
Ireo loha famehezana karazana dia avoakany.
■ Ny fomba fametahana hafanana hafanana dia azo ampiasaina amin'ny boribory, oval,
kisary, andrefana na hafa
■ Ny mpamorona angona midadasika dia natao
amin'ny fampiasana ampahany matanjaka amin'ny fanjakana ary tsy misy
Ireo singa mifehy ny fitafy mandritra ny dingana hamehezana ny famehezana.
Manana karazana maro izahay Induction Healing Sealing rafitra:
■ Fandefasana hafanam-panafody iray misy dingana iray.
■ Fanampenam-bohanana tsy tapaka mialoha ny fanangonana.
■ Manao tombo-kase ny dindon-koditra mialohan'ny hidirany.